Ny fomba hanesorana ny fofona mofomamy amin'ny boky
Haisoratra Literatiora Classic
Fikarakarana ny bokinao mba hisorohana ny hodi-jaza sy hanesorana fofona mihinana
Moa ve efa nanamboatra fofom-paty ny boky tranainy taloha? Ny fisorohana dia tena manan-danja hahazoana antoka fa ny boky dia tsy mampisy fofona ratsy. Raha mitahiry ny bokinao amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy maina ianao, dia misy fotoana tsara kokoa hanalaviranao ny ankamaroan'ny fofona ratsy mety hitranga. Na dia eo aza ny ezaka tsara indrindra vitanao, dia mety hahita blaso sy lena ianao ao amin'ny bokinao. Mampalahelo anefa fa mety hahatonga azy ireo hanitrikitrika izany. Ireto ambany ireto dia hahita toro-hevitra vitsivitsy momba ny fanesorana ny fofona ratsy avy amin'ny bokinao.
Diniho hoe Aiza no itehirizanao ny bokinao
Raha manangona boky ao amin'ny trano iray, garazy, trano fonenana na fitahirizana rakitra ianao, dia te-hametraka ny olana momba ny fitahirizana alohan'ny hanandrana hanaisotra ny fofona, ny tavy sy ny miorim-panafody amin'ny bokinao. Raha manaisotra ny fofona ratsy ianao ary manamboatra azy ireo ao amin'ny toeram-pamokarana matevina, dia ho hitanao fa miverina ilay olana. Ny hafanana be loatra dia miteraka fahantrana sy bobongolo ary hafanana be loatra ka mahatonga ny pejy ho maina sy hikoropaka - hamindra ny bokinao any amin'ny toerana mafana sy maina.
Arovy amin'ny akanjon'ny akora izy ireo
Ny akanjo jiro dia miaro ny boky mandrakotra, manampy amin'ny fihazonana ny hafanana manalavitra ilay boky. Saingy tsy manasitrana fahagagana ny jiromotra. Na dia mampiasa jiro madinika aza ianao, dia fantaro ny toerana itehirizanao ny bokinao, ary aza misavoana ny faritra mafana sy mafana, izay mety hampitombo ny mety hitrangan'ny lozam-bary na ny loto.
Aza avela hifandray mivantana amin'ny gazety
Ny manam-pahaizana sasany dia nampirisika anao handefa ny bokinao amin'ny gazety, na mametraka gazety misy eo amin'ny pejin'ny bokinao.
Na izany aza, ny fifandraisana maharitra amin'ny gazety dia mety hiteraka fahasimbana amin'ny bokinao noho ny fihenan'ny gazety. Raha mampiasa gazety ianao mba hanaisotra ny fofona ratsy, aoka ho azo antoka fa tsy mifandray mivantana amin'ny bokinao ny gazety.
Aza avela ho afa-maina na mpanadio
Ny Bleach (na mpanadio) dia mety manimba ny pejin'ny bokinao.
Raha toa ka tsy maintsy esorina ny lasoavina sy / na ny bobongolo, dia ampiasao lamba maina ary manala ny ratsy indrindra.
Atsaharo ny bokinao
Amin'ny toe-javatra sasany, na dia eo aza ny ezaka tsara indrindra ataonao, ny bokinao dia mbola handratra sarisary, malemy na efa antitra ihany. Soa ihany fa misy vahaolana mora. Mila solosaina plastika roa ianao - iray izay hiditra ao anatin'ny iray hafa. Manolotena sombin-tsigara kely ao ambany farafaharatsiny. Apetraho ao anaty container kely ny bokinao (raha tsy misy ny takelaka), ary alaivo ilay boaty plastika kely ao anaty fitahirizana lehibe kokoa miaraka amin'ny saka kitty. Apetraho eo amin'ny plastika plastika ny plastika. Azonao atao ny mamela ilay boky amin'ity boky ity hoe "de-stinkifier" mandritra ny iray volana, izay hanaisotra ny fofona (ary ny hafanana) avy amin'ilay boky. Azonao ampiasaina koa ny soda na ny saribao ao amin'ny bokinao de-stinkifier.
Ireo tsiambaratelo nafenina tao amin'ny bokin'i Agatha Christie
Boky 5 Top Momba ny mpanoratra amerikana any Paris
Ny endriny rehetra ao Moby Dick
Fomba fijery fohy momba ny vanim-potoana literatiora amerikana
Inona no atao hoe Classic ankehitriny?
Inona no fahasamihafana misy eo amin'ny literatiora sy ny literatiora?
Mpitarika ambony indrindra amin'ny haisoratra
Ny famaritana ny kilasy iray amin'ny literatiora
Ny dikan'ny hoe angano, ny folklore, ny angano, ary ny talenta Fairy
Tadiavo ny mamaky ireo kilasy!
Ny fahasamihafana eo amin'ny Kominisma sy ny Sosialisma
Ny Fahatsiarovana nampiady hevitra an'i Martin Luther King, Jr.
Top 10 Nôvambra novaina tamin'ny Rock Nostalgia
Izay lazain'ny fitsipika momba ny fikambanana maro azonao atao ao anaty kitapo golf
Ahoana ny fampiharana ny baolina amin'ny fampiasana ny sary sy ny baolina saina
Ahoana no hanohanana ny saka amin'ny pensilihazo voasarika?
Fomba fampiharana teny tenimiafina
Fiatoana fanatanjahantena ho an'ny biletà
'Jane Eyre' Fanontaniana momba ny fandinihana sy ny fifanakalozan-kevitra
Ady faharoa: USS Indianapolis
Miatrika zava-tsarotra amin'ny fananana zaza miaraka amin'ny kôlejy
Ny Etymology ny teny sy ny tantarany mahagaga
Sary iray momba ny Pirate vehivavy malaza, Mary Read
Duality Wave-Particle - Famaritana
Fahatakarana ny voka-dratsy
Vavaka Pagan sy Wiccan ho an'ny fotoana rehetra
Ny vadin'i Bath: toetoetran'ny vehivavy?
Skraelings - Ny anarana Viking ho an'ireo tompona Inuit ao Greenland
5 Piano Songs ho an'ny Romantic Stress